Chii chakakosha pakuita SEO yekambani IT?
Kune vamwe vanhu, inogona kunge iri mubvunzo wakakanganisika - uchishandisa payiri yekutsvaga injini yegwagwa, kana kuti uitungamirire zvakananga kune webhusaiti? Kana ini ini, dzimwe nguva ndichibata nehuwandu hwekugadzira software, kutarisira SEO yekambani yeCI inhengo haisi nyaya yekusarudza kupi zvako. Nzira yemagetsi inowanzounza huwandu hwakanyanya hwekutendeuka, saka kupa zvakanakisisa zvinotungamirira, uye kutakura mari yakawanda. Kungofanana nezvimwe zvinotonhora zvinotonhora kuti umire zvakasikwa kamwechete uye zvachose. Maererano nekuongororwa kwechangobva kuitwa, kuongororwa kwakawandisa kwepamusoro pepfumbamwe zvekutsvaga kwose kweGoogle kwakabatwa kunowanikwa nemigumisiro yekutsvaga kwehupenyu, apo kutsvakwa kuri kubhadhara kunongotora chimwe chinhu chinosuruvarisa chechimwe chinhu chinenge che7%. Mushure mezvose, SEO yekambani yeI IT ine zvakawanda zvakasiyana zvakafanana nemutauro unowanzo, pane chimwe chinhu chakasiyana. Ngatiedzei kutarisa danho nhanho.
Mazuva ano, kune nhamba dzisingagoni kuverengeka dzakasiyana-siyana kuti utakure mafambiro akakwirira kumapeji ewebhu pane chero chinenge chiripo. Kazhinji kazhinji, kutaura pamusoro peSeO tinoreva bhavhareji yepamusoro yepaIndaneti, somuenzaniso, weboro rekutsvaga. Kutaura zvazviri, hazvirevi kuti chii chinoshandiswa nemabhizimisi. Kunze kweSeO yekambani dzeTI, isu tinogonawo kuva nemumwe muenzaniso, tichitora chero ruzivo rwemusika rusingagoni kufungidzira. Kunyangwe iyo nzira, zvisinei, maonero angu ose anoramba achingofanana. Chinhu chacho ndechekuti kubva pane maonero eSeO neGoogle kutsvaga injini pachayo, pane zvingori zviviri zvepamusoro peji:
Izvo zvakagadzikana zvakagadzirwa zvine mazwi anokosha uye mazwi mashoma, anopa zvakawanda kukosha muverengi wose;
Organic backlinks ichibatanidza peji nemamwe mawebsite. Chibvumirano pakati pehutano hwemashure shure uye nhamba yavo, kunyatsotsanangura.
Kare kare, pakanga pane chikonzero chokuti kushatisa zvishoma nezwi rekukosha kwemashoko (mukati mechikonzero chakanyatsoenderana) kunogona kunge kwakakwana kuti unzwe zvakanaka newebsite yako. Nenzira iyo, kuisa zvimwe zvinoratidzika zvakanaka shure zvakasungirirwa nemashoko makuru uye kutaurira kune rimwe simba rakasimba, asi zvichida risina simba risina kukodzera nevanongoita vaviri nenzira imwechete yakafanana nemashoko makuru anogona nyore nyore kutakura webhusaiti yega yega yebhanhire kumusoro kweGoogle kutsvaga. Kuita kudaro, hatikwanise kuita misiyano-kuita SEO yekambani dzeTI, kana somuenzaniso mutengesi wezvokudya. Chirongwa chete, uye naizvozvo mutsauko wepakati, wakanga wakafanana - uchiita imwe dhongwork kuti ushandise icho chaimbova "chinangwa" chemuviri.
Asi nguva dzakapfuura, uye nhasi maitiro eGoogle ekutsvakurudza ari kuwedzera kuwedzerwa. Nemashoko akajeka, injini yekutsvaga yakwanisa kunyatsogadzikana ikozvino kuisa zvinyorwa zvepaji pega pega pasi pekutsvaga kwakaoma, kushandisa kupfuura mazamu makumi maviri kuti pakupedzisira uite chisarudzo chakakosha. Chero chero chekubiridzira, kushungurudzwa kana kunyange zvakanakisisa zvakagadzirirwa zvirongwa zvisiri izvo hazvisashandiswi. Saka, kutamba kwakanaka kwemazuva ano kunoreva kuva nehuwandu hwehutano hwevanhu, pamwe chete nehuwandu hwezvinhu zvekugadzira kuti webhusaiti ionekwe yevanjini. Kuti uwane humwe humwe kunzwisisa huripo, kunze kwehuwandu nehutano, ini ndinokurudzira kuverenga pamusoro pepamusoro pezvinhu gumi zviripo zvekunyoresa zve SEO. Ingoenda kuenda kunyoresa, inyaya inopisa Source .